जनताको प्रधानमन्त्री बन्ने कि ? - Ratopati
- | आरबी खड्का
गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना छ । देशले गरिबीको चंगुलबाट मुक्ति खोजिरहेका बेलामा तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । यसबेला बिदेशमा रहेको प्रवासी धेरै खÞुशी छन । तर, विगतका गुनासा, भविष्यका सम्भावना र वर्तमानका चुनौती धेरै छन् तपाईं सामु । सुरुवात कहाँ र कसरी गर्ने, कुन–कुरा आम जनताका लागि प्रमुख हो भन्नेतर्फ संवेदनशिल हुन जरुरी छ । जब देशले फड्को मार्ने अवस्था आउँछ, नयाँ र रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
सिंगो देश अग्रगामी निर्णय गर्न डराउँछ र यथास्थितिमा रमाउँछ अनि सधैं परिवर्तन भएन भनेर गुनासो गर्छ । परिवर्तनसँग असुरक्षा महसुस गर्छ । यो नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति बनेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू देशमा क्रमभंगता चाहिएको छ । त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकार चाहिएको छ । सरकार भन्नेबित्तिकै पार्टी, नातागोता, पैसावाल र शक्तिवालभन्दा माथि हो । यो देश र जनताका लागि हो भन्ने सरकार चाहिएको छ । निकै आधारभूत तहमा रहेका हामीजस्ता देश बिदेश बस्ने जनतालाई समृद्धिको सपना देखाउने र ती सपना साकार गर्न अभिप्रेरित गर्ने सरकार चाहिएको छ । के त्यस्तो सरकार हामी तपाईंबाट आस गर्न सक्छौँ ?
नेपाली जनताको आशा भरोसा मुख्य गरी शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका हकमा राष्ट्रिय समझदारी कायम गर्न सक्नुहुनेछ । यसैगरी जनताको गाँस, बास र कपासको समस्या हल गर्न केही पूर्वाधार या आधार निर्माण गर्ने काम तपाईले गर्न सक्नुहुने छ । तपाईको कार्यकालमा सबै कुरा सम्भव नहोला । तपाईको कार्यकालको सफलता हुने छ । फेरी पनि सफल कार्यकाल र सवृद्ध नेपालको शुभकामना !